संसदमा गगन थापा भन्छन प्रधानमन्त्री ज्यू मेरा बा सरह हुनुहुन्छ राजिनामा दिएर बिश्राम गर्नुस (भिडियो) ! || सुनौलो नेपाल
संसदमा गगन थापा भन्छन प्रधानमन्त्री ज्यू मेरा बा सरह हुनुहुन्छ राजिनामा दिएर बिश्राम गर्नुस (भिडियो) !
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्राम गर्न दिन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई आग्रह गरेका छन्।बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै थापाले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे संसदमा जानकारी किन गराइएन भन्दै प्रश्न उठाए।
कम्युनिष्ट पार्टीका साथीहरूले धेरैपटक प्रधानमन्त्रीलाई बा भनेर सम्बोधन गरेको सुनेको छु थापाले भने प्रधानमन्त्री बासरह हुनुहुन्छ। हामी हाम्रो बा बिरामी हुनुभएको भए के भन्थ्यौं? बा धपेडी नगर्नुस् आराम गर्नुस् विश्राम गर्नुस्। हामी हाम्रो बालाई त्यसो भन्छौं तर हाम्रो प्रधानमन्त्री बालाई किन यसो भन्न सक्दैनौं
सत्तारूढ नेकपामा प्रधानमन्त्री हुन इच्छा राख्ने र पहिला पनि प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू भएको उल्लेख गर्दै उनले बिरामी भएका प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले विश्राम दिनुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई विश्राम गर्न दिनुस् उनले भने कार्यकारी प्रमुख एकैपटक लामो समय बाहिर बस्दा राष्ट्रिय सुरक्षा कूटनीतिक मर्यादा जोखिमको प्रश्न छँदैछ। भिडिओबाट मन्त्रीसँग कुरा गरेर शासकीय जिम्मेवारी पूरा हुन सक्दैन।
प्रधानमन्त्री ओली अहिले उपचारका लागि सिंगापुरमा छन्। १२ वर्षअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका ओलीमा अहिले मिर्गौलासम्बन्धी एन्टिबडी बढी भएको छ।गत साउनमा उनी पहिलो पटक उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए। पहिला थाइल्याण्डको बैंककमा नियमित फ्लोअप गराइरहेका प्रधानमन्त्रीले सिंगापुरमा औषधी परिवर्तन गरेका थिए।उक्त औषधीको असरले बिरामी हुन थालेपछि उनी फेरि भदौ ५ गते सिंगापुर गएका हुन्। प्रधानमन्त्री लामो समय विदेश भएकाले उनले भिडिओ कन्फ्ररेन्सबाट मन्त्रीहरूसँग छलफल गर्ने गरेका छन्।
बुध, भदौ १८, २०७६ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस